Japana: Herinandro Fampiofanana Ho Fisorohana ny Loza · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Jolay 2017 17:05 GMT
(Marihina fa tamin'ny 27 Septambra 2009 no nanoratana ny lahatsoratra teny anglisy)
Herinandro Fisorohana ny Loza [jp] ny herinandro voalohany amin'ny Septambra ao Japana. Mandritra io herinandro io, nivory ny sekoly, ny fikambanana sy ny mpiasa birao mba hikarakara fizàram-pisorohana ny loza. Ho lalaovina ny horohoron-tany, ny tondra-drano, ny afo sy ireo loza hafa, ary tokony handray anjara ny olom-pirenena rehetra .
Samy miaina ny fiainany ao anatin'ny fahafantarana ny tsirairay fa mety hitranga na aiza na aiza sy amin'ny fotoana rehetra ny loza any amin'ny firenena izay ahitana horohoron-tany miisa 100.000 isan-taona (anisan'izany ireo tsy ren'ny olombelona), ka noho izany dia ilaina ny fitantanana haingana izany amin'ny fomba mahomby.
Sarin'i Nemo`s great uncle tao amin'ny Flickr
Namaritra ny fanofanana izay natao tao an-tanàndehibeny i Obarin, izay miasa amin'ny Vokovoko Mena (misy sary tsara tarehy ihany koa hita ato amin'ity lahatsoratra ity).
Any amin'ny tanàndehibenay, nosokajiana ho ao amin'ny vondrona fisorohana ny loza ny efitrano tsirairay, ary nisy ny fandraisana anjara tamin'ny hetsika maro vao maraina.
Efa nisy ireo nianatra nanangana tranolay sy ireo nampiofanina hamono afo tao anatin'ireo vondrona ireo.
Koa satria aho ao amin'ny Vokovoko Mena dia nampianatra ireo olona ny fomba fitantanana ny: Foiben'ny Mpilatsaka An-tsitrapo Hisorohana ny Loza` izahay sy ny mpiara-miasa amiko. Nandray anjara tamin-kafanam-po ihany koa ny mpamonjy voina ao an-tanàndehibe. Natao an'ohatra ny fianarana izay tokony hatao raha sendra firodanan'ny trano ary nisy ny alika nampiofanina mba hitady ireo niharam-boina.
Nilalao ny fomba fanavotana ny olona tafahitsoka ao ambany trano rava ihany koa ny ekipan'ny mpamonjy voina. Nandray anjara ihany koa ny angidimby fanaovana vonjy taitra ao amin'ny prefektiora ary nampiseho anay ny fomba hibatana sy hitondrana ny maratra.
Lahatsary avy amin'ny Tokyo Mix momba ny fisorohana ny loza izay natao tany andrefan'i Tokyo tamin'ny volana aogositra.
Nanazava ny zavatra nianarany tamin'ity taona ity ny bilaogera iray izay mipetraka any amin'ny prefektioran'i Shizuoka (atsimon'i Tokyo) .
Ny faha 11 Aogositra, nisy horohorontany [*] teo amin'ny ambaratonga faha 6 namely ny prefektioran'i Shizuoka . Izany no nahatonga ahy hahatakatra ny maha zava-dehibe ny fiomanana amin'ny loza toy izany. “Nanomboka tamin'ny herinandro lasa ny Herinandro Fisorohana ny Voina tao amin'ny Perfektiora ny ary nisy ny fanofanana natao isaky ny faritra ao amin'ny prefektioran'i Shizuoka amin'ny fitantanana ny horohorontany lehibe (miaraka amin'ny hamafiny ambaratonga faha 7 na mihoatra).
Tamin'ity taona ity, izaho no Filohan'ny Antenimieran'ny tanàndehibe misy ahy ka notendrena aho ho any amin'ny fivoriana mikasika ny “fomba hanaovana filanjana vonjimaika.” Nianatra ny fomba haingana amin'ny fitondrana ny maratra aho, amin'ny alàlan'ny fampiasana bodofotsy sy lambam-pandriana.
Nianatra ny fomba fampiasana ny tsofa elekitirika ny gropin'ny herinaratra sy ny paompy azo entin-tànana, izay hita mandrakariva any anatin'ny fitaovana fisorohana ny loza, ary koa ny fomba voalohany hanomezana fanampiana vonjy ny olona iray naratra, izay nahitana ny fampiasana lamba telozoro .
Nividy gabone azo entina mandehandeha sy nianatra ny fomba hametrahana izany ihany koa izahay tamin'ity taona ity.
Hita ao amin'ny bilaogin'i Kerestinu ireo sary mahavariana tamin'ny fampiofanana tao amin'ny efitrano Adachi (Tokyo) .